Gutuu Hawaasa Baqataa Oromo Biyya Masrii Hundaaf : – Welcome to bilisummaa
Gutuu Hawaasa Baqataa Oromo Biyya Masrii Hundaaf :
bilisummaa October 19, 2014	Leave a comment
Caayaa Tokkummaa Baqattota Oromo Biyya Masrii Onkololeysa 19/2014
Akkuma bekkamuu warri Commnity Ethiopia (Habasha ) Magaalaa Kaayro keysa jiraatan Enbaassi Ethiopia Magaalaa kaayrotiin hogganamaa jiraachuun isaanii hubatamaadha. Garuu kuni dhimma isaanii oso tahuu Dabre Dabree jechaan hujiin Ilmaan Oromo tuttuqaa jiraachuu isaanitu mul`ata Akkuma yaadatamuu bara dabre keysa dura taa’aan isaanii VOA waliin gaaffii fii Debi’ii godheen Islaama Oromo waaxiqqo malee namni Ethiopia biro kaayro keysa hin jiru jechuun tuffii Ilmaan Oromoof qabu ifaan ifatti mul’isee turee . kana qofaan hin dhaabbanne ololli isaanii dabalataan Oromo Amantiin Addaan Qoqqoduuf ijolleen UNHCR keysaa Afaan hiikan Oromo Islaamaa malee Oromota kiristaana bakka hin bu’an jechuudhaan ololaa addaa gadgeysaa jiraachuun isaanii barreyfama dhihoo kana Afaan Amaraa fii TV EST irratti baasan keysatti dubbatanii jiru .
Olola kana bakkaan geyachuuf Onkololeysa 19/2014 Hiriira Cubbuu fuula UNHCR duratti bahuudhaan Oromofii UNHCR Balaaleyfataa olanii jiru . gocha hamaa fii badaa habashonni akkuma Aadaa isaanitti ofaa jiran kana duraa dhaabbachuuf Caayaan Tokkummaa Baqattota Oromo Biyya Masrii qophii xumurataa jira. gochaa fii ademsa isaanii kana ni fashalsina jabeysinee balaaleyfanna ifaan ifatti duraas dhaabbannee hujiin agarsiifna.
Gadaan Gadaa Bilisummaati .!!!
Injifannon Ummata Oromoof .!!!
Koree Caayaa Tokkummaa Baqattota Oromo Biyya Masrii .
Onkololeysa 19/2014 Kaayro.
Previous Paartileen siyaasaa uummata Oromoo bakka bu’uun naannoo Oromiyaatti dorgomuuf jedhan kudhan keessaa sagal beekamtii guutuu ta’e argatanii jiru.
Next Fuudhaa fii heeruma Aadaa Oromoo